Ucam, ikhamera encinci efihliweyo kunye nekhuselekileyo yokujonga
Ucam, ikhamera encinci efihliweyo kunye nekhuselekileyo yokugada
I-Ucam yikhamera encinci evela kwinkampani ye-IoTeX ethi, ukongeza ekunikezeleni ngeempawu zakutshanje zokujonga kwimarike, ithembisa ubumfihlo kunye ukhuseleko enkosi kwi-blockchain kunye nokubethela idatha. Nokuba siyintoni na isizathu sokufuna ukufaka ikhamera yokujonga ekhaya okanye eofisini, inye into eqinisekileyo, kukuba asifuni kuhlola Imbuyiselo! Ngenxa yoko, abantu abaninzi ngoku bayathandabuza ukuyifumana.
Ngokungafaniyo nezinye iikhamera, i-Ucam isebenzisa i-blockchain ukubonelela ngokhuseleko esinalo ngokweneneisidingo.
I-blockchain kunye ne-encryption yokuthintela ukuqhekeka
Eyona nto iphambili ye
kukuba isebenzisa ibhlokhi ukubonelela ngokhuseleko kunye nokugcina imfihlo esiyifunayo ngokwenene.
Ngokusisiseko, i-blockchain yitekhnoloji yokugcina nokuhambisa ulwazi oluthatha uhlobo lwedatha, kodwa engaxhomekekanga kuwo nawuphi na umzimba ophakathi. Ukongeza kwisantya sayo, inethuba lokukhuseleka ngakumbi. Isitshixo esineempawu ezingama-50 senzelwe umsebenzisi ngamnye kwaye akukho mntu unokuqhagamshela kwikhamera yethu ngaphandle kwayo.
Kubaluleke kakhulu ukuyibhala phantsi naphina xa kunokwenzeka sisuse usetyenziso okanye sitshintshe ifowuni, kuba akukho mntu une ikopi, nkqu nenkampani yeIoTeX.
Ngokungafaniyo nezinye iinkqubo zekhamera, awunyanzelekanga ukuba wenze iakhawunti,
Isishwankathelo sento esinokuyibona kwifowuni yethu eqhagamshelwe kwi-Ucam yethu.
Ezona zinto zisandula ukwenzeka kwimarike Enkosi kwisicelo esihambelanayo, silawula yonke into esiyibambayo, sikhetha ukugcina ulwazi lwethu luyimfihlo, sabelane ngalo kufutshane okanye sigunyazise ukusetyenziswa kwabo kubanikezeli beenkonzo.
ikhamera ixhotyiswe ngezona zinto zisandula ukwenzeka kwimarike yokujonga efana ne:
Encrypted 1080p HD video from Ucam to mobile deviceekukhetheni kwethu.
Ukugubungela izidanga ezingama-360 ezibandakanya imo yepani, ukukwazi ukutyeba nokusondeza kude.
Umbono ozenzekelayo wasebusuku, ovumela ukubonakala ukuya kuthi ga kwiinyawo ezingama-36. ngakumbi ubukhulu bayo buncinci, nto leyo eyenza ukuba kube yinto efihlakeleyo endlwini okanye eofisini.
Yonke into kulula kakhulu ukuyilungisa kunye nesicelo, esifumaneka ngesiFrentshi kwaye sihambelana ne-iOS kunye ne-Android. , ukuze nokuba ube ngumqali, senze kakuhle. yeelensi.
Kufuneka siyihambise ngesandla iimbonakalo yesibuko sekhamera, kodwa awunyanzelekanga ukuba uqhagamshele kwisicelo ngawo onke amaxesha emini.
Malunga nexabiso, ikhamera ithengisa malunga ne-75 yeedola apho kuya kufuneka wongeze umrhumo wokungenisa malunga neshumi elinesihlanu Iidola.
Ngokumalunga nendawo yokurekhoda, i-Ucam isinika ilungelo lokufumana iiyure ezi-3 simahla kwisithuba se-10 sekhefu kwilifu labo. Ngaphandle koko, kuya kufuneka ukhethe isicwangciso kwi-US $ 20 ngonyaka ngokungasikelwanga kumanqanaba evidiyo kwimizuzwana engama-20.
Unokukhetha ukungasebenzisi inkonzo yokugcina kunye nokugcina yonke into esecaleni lethu, usebenzisa i-microSD ikhadi, kodwa ngokucacileyo oko kuthetha inani elincinci lomda wendawo yokugcina.
Funda ngakumbi malunga nekhamera yokujonga i-Ucam kwi-IoTeX
Fumana ikhamera ye-Ucam kwiAmazon .ca
Le kholamu ineekhonkco zokudibana.
Jonga ukulala kwakho ngesizukulwana sesibini sikaGoogle Nest Hub ongumncedisi welizwi
2021-03-31 20:19:39 | Indlu
Jonga ukulala kwakho kunye neGoogle Nest Hub yesibini umncedisi welizwi uGoogle usungula isizukulwana sesi-2 somncedisi welizwi ngomboniso: iNest Hub. Ukongeza ekuphuculeni umgangatho wesandi saso nge-50%, eyona nto intsha yeNest Hub kukuba inokulandela kwaye ibeke esweni ukulala kwethu. Inqaku elih...
I-Floss ngokufanelekileyo ngakumbi kunangaphambili nge-Cordless HydroPulser
I-Floss yasekhaya ngokuSebenzayo ngakumbi kunakuqala nge-Cordless HydroPulser Dibana ne-Waterpik Cordless HydroPulser, igajethi ethatha indawo yamazinyo ngejethi yamanzi ukususa i-plaque engakumbi kunye nokuphucula impilo yeentsini. Iyaphatheka kwaye ayinantambo, igajethi ilungele amagumbi okuhlambe...
I-Echo Show 10: umncedisi welizwi osilandela ngokusondeleyo ejikeleze indlu
I-HomeEcho Show 10: umncedisi welizwi osilandela ngokuthe ngqo kwindlu iAmazon usungule umncedisi welizwi omtsha ngescreen se-intshi eyi-10.1, i-Echo Show 10. Ukongeza ekusincedeni kwimisebenzi yethu, izicelo zethu zemihla ngemihla kunye nezixhobo zethu zasekhaya, umncedisi ubonakala ekwazi ukusilan...